Shuriken ephepheni ngezandla zakhe: umzobo, ividiyo, isithuba sefoto
I-Shuriken, eyenziwe kwindlela yokwakhiwa kwe-origami, yenye yezona zixhobo eziqhelekileyo zephepha. Kukho iindlela ezininzi zokwenza, i-version elula izakuthatha ixesha elide. Ukuba ulandela imiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo, akunzima ukwenza i-shuriken ephepheni ngezandla zakho.
Shuriken yinkwenkwezi esetyenziswa yi-ninjas kunye nama-Samurai. Le ngcamango yavela eJapan, ekuguquleleni ithetha "ityala elifihliweyo esandleni". I-Shuriken yayisetyenziswe njengesiponsa sokuphosa, esasinceda rhoqo kwixesha elona linomdla kakhulu. Yenziwe ngamacangca amancinci yentsimbi, bekufuneka kubekho imipu ebukhali. AmaShurikens ahluke ngokubonakala. Zaba neebhozo ezisibhozo, ezine okanye ezihlanu. Ingcambu ekhethekileyo yanikezelwa kwisibini sesikhali, esaphucula iipropati zayo.
Namhlanje shuriken iphepha eliyaziwayo elenziwe ngesandla, apho abantwana badlala khona egcekeni ngokuzonwabisa, becinga ukuba bangabanikeli beentlanga ezingenasibindi ze-ninjas.
Iskimu se Shuriken
Kukho iindlela ezininzi zokuvelisa i-shuriken, ebonakalayo kwimimiselo engezantsi.
Nangona umehluko kwimisebenzi ye-shuriken, zonke iinguqulelo zisebenzisa izinto ezifanayo kunye nezixhobo. Ukwenza inqaku malunga neendlela zokuqala njengeempawu, uya kufuneka:
iphepha - kuyinqweneleka ukusebenzisa iphepha elinemibala emibini, xa kungenjalo, ungathatha ii-A4 eziqhelekileyo;
iisisi (zingatshintshwa ngomgca wokubhala);
Yenza i-shuriken yephepha ngezandla zakho iza kunceda icebo ngeziteyathelo ngezinyathelo.
Umyalelo wenyathelo-nge-nyathelo lokukhutshwa kwe-shuriken
Ngezansi imigaqo yenyathelo-nge-nyathelo kunye nesithombe esiza kukunceda ukukhishwa kwiphepha ukuya kumntwana.
Okokuqala kufuneka ulungiselele isikwere sephepha. Ingenziwa kwiphepha eliqhelekileyo lephepha le-A4, ukuba uyifake i-diagonally ibe yintantathu, kwaye unqunyulwe inxalenye engaphezulu ukusuka ngezantsi ngeesisi.
Emva koko isikwere esipheleleyo sephepha kufuneka sinqunywe kwiindawo ezimbini ezifanayo, njengoko kuboniswe kwisithombe.
Emva koko, iqela ngalinye lephepha kufuneka lifakwe kwisiqingatha.
Emva koko kuyimfuneko ukwenza ifonti. Ukwenza oku, nganye ikona kufuneka iguqulwe. Kubaluleke kakhulu ukuba banamathele kwiidiagonal ezichaseneyo, ngaphandle koko kubekho iphutha elikhulu. Indlela yokwenza ngayo, ungabona kwisithombeni.
Xa isenzo esedlulileyo sigqityiwe, unokuqhubeka kwisinyathelo esilandelayo. Kubalulekile ukugoba zombini iikona zexesha elizayo ukukhishwa kwiphepha ukuya kwiziko. Kodwa okokuqala kufuneka ulungelelanise iimbombo zombini omnye komnye. Emva koko kuyimfuneko ukuyiqinisa kwiindlela ezahlukeneyo.
Kwinqanaba elilandelayo, inkwenkwezi ihlanganiswe. Ukwenza oku, esinye isiqwenga samaphepha esiphezulu sixhomekeke kwelinye i-perpendicularly.
Umgca ophezulu kwiphepha lephepha, elisezantsi, kufuneka lifakwe kwi-recess ephakathi kwento ephezulu, oko kukuthi, ukuxhuma iinxalenye.
Ukuqhubela phambili ukwenza i-shuriken ephepheni, qinisa ikhoneni elingaphezulu ngaphakathi kweli qhekeza. Izenzo ezifanayo ziyenziwa ngekona elingezansi.
Emva koko umzobo wephepha kufuneka uguqulwe kwaye amaqabunga asele aphendukile. Oku kuya kunceda ukudibanisa ngokuqinileyo into nganye.
Ngaloo ndlela, ufumana i-shuriken elula ephepheni onokuyiphonsa. Ukuba ubonisa ukucinga kwakho kwaye usebenzise iphepha lemibala eyahlukileyo, i-handicraft inokufumana ngakumbi.
Ividiyo: indlela yokwenza shuriken ephepheni ngezandla zakho
Abaqalayo kufuneka baqale basebenzise inguqu elula yokuvelisa i-shuriken ephepheni, kuba ekungabikho kwamava ungadideka. Ividiyo elapha ngezantsi ibonisa indlela yokwenza ubugcisa obuqhelekileyo obunezandla ezine-artisam ezenziwe ngesandla. Le vidiyo elandelayo ibonisa umyalelo ohambelana nenyathelo-nge-nyathelo ekuveliseni i-octagonal shuriken-transformer eyenziwe kwiphepha. Ubunqwenelekayo kukuba iyakuthabatha iifom ezimbini. Ngokuqhelekileyo i-shuriken ichongiwe ngomntu onokukwazi ukuvuza umnikazi wayo ngokunyamezela, isibindi nokunyamezela. Kwiincinci ezincinci, i-craft yephepha iyakutshintsha indawo, ukuba ubonisa ukucinga kwakho. Ividiyo esezantsi ibonisa indlela yokwenza iimpapasho zeenkwenkwezi ezikhomba ezintandathu kwaye zidibanise kunye.
Umzekelo wengubo yentombazana
Hamba kwi-napkin ngezandla zakho-iiklasi ezi-5
Isikhumbuzo "Isigulane" sonyaka oNtsha ukusuka kwidongwe ye-polymer: njani yokwenza isikhumbuzo soNyaka omtsha ka-2015
Umgca we "Dark Knight" uya kufakwa ngo-2009?
Izizathu zoBugcisa baBesifazane
Inkathazo yabasetyhini bexesha eliphakathi
Yintoni enxiba ngayo uNyaka omtsha kumfazi
Iimbotyi ezitshiweyo kunye nemifuno
Isobho se Crayfish
Awukwazi ukufumana ubunzima obunzima ebusika
IsiKorea kwiitamatati kunye newayini
I-shortbread cookie nge jam
Kutheni abafazi besenza isigqibo sokuhlinzwa ngoplastiki?
Ngaba kunokwenzeka ukuthenga uthando lwangempela ngemali?